BARNAAMIJKA ONLINE OGEYSIISKA MATRIMONAL - Dib-u-cusboonaynta Ruuxnimada Maalin kasta
MACLUUMAAD DHEERAAD AH OO DHAMMAAN ONLINE
Dib-u-dhiska Nolol-maalmeedka Maalin kasta
Fikirka Maalinlaha ah
Carruurta Diimeed - I
Carruurta Diinta - II
Diinta Ilmaha - III
Waajibay by uu eraygiisa
Waqtiga Lagu Bedelayo
Xeerka Raadiyaha bogga
Nala soo xiriir |
KU SOO DHAWAADA WeBSITe Adventist Alighieri fikirka ONLINE!
Camira: Thiago Amaral de Oliveira - Baixo Guandu / ES - Tan iyo markii April 21 2018 / Xiriirada: (027) 99777-2514 - vivo / (027) 98155-2234 - Tim
Ku dheji 12 2018 bisha Sebtembar by Mucaawin
Leave Leave Comment
Dabiiciga Dhalinyarada 2019 - Nolosha Nolosha
Ku dheji 22 August 2018 by Mucaawin
Daabacaadda 2001 Digniinaha Dhallinta Dhalinyarada iyo Weriyaha Francisco Lemos waa saaxibta dabiiciga ah iyo cilmi baaris aan la aqbali karin ee casharradiisa. Waxa uu ku dhashay Itabuna, Bahia, wuxuuna leeyahay dareen gaar ah
Fikrado yaryar - 2019 Dhiirigelinta Carruurta
Ku dheji 22 August 2018 22 August 2018 by Mucaawin
Dunidu waxay leedahay waxyaabo badan oo xiiso iyo waxyaabo badan oo xiiso leh oo uu Ilaahay inoogu sameeyey. Tusaale ahaan, maxaa timahaagu u la mid ahayn timaha yar ee saaxiibkaaga? Halka ay ka yimaadaan
2019 Dumarka Haweenka - Fikradaha Muhiimka ah
Miyaad ogtahay in Ilaah kugu kalsoon yahay? Isagoo keliya ayaa ka fikiraya, Wuxuu ku farxaa codad farxad leh. Dhiirigelintaani waxay ka buuxsantaa sheekooyin u dabaaldegaya isku xirka quruxda badan
2019 Fikirka Maalinlaha - Rajeynteena
Ku dheji 22 August 2018 29 August 2018 by Mucaawin
Hope waa baraaruga riyo. Waa midhihii ballanqaadka ahaa, ee farcanka lagu dhex beeray ciidda qalbigiisu ka buuxsamay rumaysadka. Rajada ayaa indhahayaga indhaheeda ku soo celisa,
Soo hel maalin kasta waxa Ilaah rabo inuu kuu sheego! Dammaanad qaadkaaga horeyba. Facebook Faallooyinka
2018 - Koraaya Ciise
Ku dheji 21 April 2018 4 May 2018 by Mucaawin
Ku dhowaad ilmo kastaa wuxuu rabaa in uu weynaado. Dabcan, waxaad dooneysaa inaad koro. Laakiin waxa fiican waa markaan ku soo baxno dhinacyo badan. Baybalku wuxuu sheegay in
2018 - Walaac yar
2018 Madadaalada Sunset
Fikradda qorraxda ayaa la aasaasay sannadkii ugu dambeeyey iyada oo ah arrin aan lagama maarmaan ah u helin Sabtida. Maxay ka qayb qaadatay tirada lambar kasta
Waqtiga ugu Fiican ee Maalinta Maalinta - 2018
Ku dheji 7 April 2018 4 May 2018 by Mucaawin
Baro diidmo cusub oo xoojin doona ruuxaanta qoysaska ee 2018 Waddada noloshu ku adagtahay Masiixiyaddu waxay ku bilaabataa wada-xaajood maalmeedka Ilaah. Si aad u caawiso
Naxariista dhalinyaradu - Fikirka Fikirka 2018
Ku dheji 28 February 2018 4 May 2018 by Mucaawin
Wax kastoo aan sameyno waa natiijada fikradaheena. Sidaa darteed, Fikirka saxda ah waa sirta guusha. Sulaymaan, ninka ugu wanwanaagsan ee dunidu wuu ogaa tan. Caqiidada Ilaah,
Madadaalada Haweeneyda 2018 - Jacayl aan weligeed aheyn
Diinta oo ay qoraan dumarka soo maray jacaylka iyo nimcada Ilaah ee dhinacyo badan oo nolosha ah. Waxay doonayaan inay kula wadaagaan dareenka cajiibka ah ee joogitaanka
2018 Maalinlaha Maalin - Maalin aan La Aqbali Karin
Maalmaha qaar waxay calaamad u yihiin nolosha weligeed, waxay yihiin dhibcaha webiyada ee jiritaanka. Haddii noloshu tahay derbi, maalmo waxay noqon laheyd lebbiska. On Wall Wall of History
Updates Site cusub
Shabakada Hoyga Dhalinyarada
La kulan Portalskayaga internetka
Soo dhawow, marti.
Saadaasha ah Under Guandu / ES bixiyay CPTEC / INPE
Gaaban GNSUMX ee 300 Group
Ku raaxayso Rajada dhalinyarada
Xariirka Iskuulka Sabtiga Siddeeda
Soo hel kaniisad
Kala qaybiyay WordPress e Donovan.